गण्डकी विश्वविद्यालयको शैक्षिक भवन शिलन्यास | eAdarsha.com
लेखनाथ । बजारको माग एकातिर, पढाइ र जनशक्ति उत्पादन अर्कोतिर । बेरोजगारी समस्या उस्तै छ । युवापुस्ता भने रोजगारी खोज्दै विदेश भौंतारिने अवस्था ।
प्राविधिक शिक्षा भनेको कुर्लेको पनि धेरै नै वर्ष भयो । तर जनशक्ति पाउनै मुस्किल । यही मुस्किललाई पार लगाउन भन्दै गण्डकी प्रदेश सरकारले विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्यायो । पोखरा विश्वविद्यालयलाई प्रदेश मातहत ल्याउने पहल पनि भएकै थियो । संघ सरकार मातहतको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि प्रदेशले आँखा लगाएको थियो । तर प्रदेश सरकारलाई सफलता मिलेन । त्यसैको फलस्वरुप स्थापना भयो गण्डकी विश्वविद्यालय ।
बजारले मागे अनुसार जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ स्थापना भएको विश्वविद्यालयमा पोहोर फागुन ४ गते कुलपति नियुक्त भए । न्यासिक परिषद गठनदेखि पदाधिकारी नियुक्तिका काम समेत भइसकेका छन् । आफ्नै मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि समेत विश्वविद्यालय पहलरत छ । कोर्स डिजाइनको काम पनि भइरहेकै छ । आइटीको पढाइ त सुरु हुनै आँटेको छ ।
अहिले भाडाको घरमा सञ्चालन हुँदै आएको विश्वविद्यालयले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर ३२, स्यालतहरामा मंगलबार भवन शिलान्यास गरेको छ ।
पोखरा महानगरपालिका प्रमुख (मेयर) मानबहादुर जिसीले प्रशासनिक भवन शिलान्यास गर्दे विश्वविद्यालयको स्थापनासँगै आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न अग्रसर रहन आग्रह गरे । नेपालका अरु विश्वविद्यालयले जस्तै परम्परागत शिक्षा दिएर अब नहुने भन्दै चाहिए व्यावहारिक शैक्षिक थलोका रुपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
लेखनाथमा यसअघि नै पोखरा विश्वविद्यालय छ । त्यसैको केही पर यो विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन लागेको छ । पोखरा महानगरमा लेखनाथ गाभियो भनेर दुख मान्नेहरुका लागि यो विश्वविद्यालय गतिलो जवाफ रहेको उनको भनाइ थियो । विश्वविद्यालय स्थापनासँगै स्थानीयस्तरमा बजार विस्तार हुन भन्दै स्थानीय उत्पादन खपत समेत बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
विश्व विद्यालयका कुलपति प्राडा गणेशमान गुरुङले स्रोत जुटाउँदै विश्वविद्यालयलाई अगाडि बढाउन आफूहरु प्रयत्नरत रहेको बताए । शैक्षिक थलोलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउने गरी काम भइरहेको समेत उनको उल्लेख गरे । कोरोना र अन्य कारणले भनजस्तो काम हुन नसके पनि उद्देश्यबाट आफूहरु कति पनि विचलित नभएको कुलपति गुरुङलले भनाइ राखे ।
गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गिरिधारि शर्मा पौडेलले प्रारम्भिक चरणमा जग्गा प्राप्तिसँगै अबका दिनमा भवन निर्माण, स्रोतको खोजी जनशक्ति उत्पादन लगायतका काममा विश्वविद्यालय लागेको बताए । यो प्रदेशको गौरवको आयोजना रहेको र प्रदेश सरकारको सुरुदेखिको चाहाना भएकाले सफलतामा पु¥याएरै छाड्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
गण्डकी विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा नवराज देवकोटाले विश्वविद्यालयको भवन शिलान्यासँगै स्यालतहराको नाम अब ज्ञानकुञ्ज राखिएको जानकारी गराए । विश्वविद्यालयको नीति निर्माण, वित्त व्यवस्थापन, अर्थ संकलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार गर्दै आफूहरु अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता उनले जनाए । कार्यक्रममा पोखरा महानगरपालिका ३२ का वडाध्यक्ष अक्कलबहादुर कार्की, वडा सदस्य विष्णु तिवारी, निर्माणको जिम्मा पाएको खानी निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक विदुर गौतम लगायतले बोलेका थिए ।
सहरी विकास तथा भवन कार्यालय कास्कीका प्रमुख डा. महेन्द्र बानियाँले विश्वविद्यालयको गुरुयोजना निर्माणकै लागि ३ महिना लागेको बताए । गुरुयोजनालाई असर नपर्ने गरी अहिले प्रिफ्याब प्रयोग गरी भवनहरु बनाइने जानकारी दिए ।
लागत अनुमान रकम ९ करोड ४८ लाख रहे पनि ६ करोड ७४ लाख रुपैयाँमा खानी निर्माण सेवा प्रालिले ठेक्का पाएको छ । २०७८ माघ १५ गते सम्म सम्पन्न गर्ने गरी कम्पनीले जिम्मा पाएको हो । करिब ७४ रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुने प्रशासनिक, शैक्षिक, प्रायोगशाला, क्यान्टिन, पुस्तकालय लगायत संरचना बन्नेछन् । अहिले बनेका भवन कालान्तरमा कर्मचारी र पदाधिकारीको आवासका लागि प्रयोग गरिने छ । गण्डकी विश्वविद्यालयका प्रशासकीय प्रमुख घनश्याम पौडेलले बताए ।